7 safidy hafa amin'ny WhatsApp tsara na tsara kokoa aza. Vaovao momba ny gadget
Nanapa-kevitra ny Facebook fa hampiasa vola be amin'ny fividianana WhatsApp, noho izany dia lasa ny fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo miaraka amin'ireo mpampiasa betsaka indrindra manerantany ary tsy isalasalana fa ny malaza indrindra. Tamin'ny voalohany dia tsy nanao firaisana ny rindranasa roa, satria nieritreritra na nanandrana mitady tombony ho an'ny tambajotra sosialy malaza.
Na izany aza, nandritra ny herinandro vitsivitsy dia nangataka alalana tamin'ny mpampiasa azy ny WhatsApp mba hizara angona amin'ny Facebook. Io dia andro maromaro lasa adidy hanohy ny fampiasana ny mailaka fandefasan-kafatra eo noho eo. Satria tsy dia maika ny hamakivaky ny hoop ary ambonin'izany rehetra izany dia tsy tianay ny hizara ny angon-drakitra manokanay eo anelanelan'ny fampiharana, anio dia hasehonay anao Solony 7 amin'ny WhatsApp no ​​tsara na tsara kokoa noho ny fampiharana malaza aza.
Sarotra ny hahafantatra ny fiafaran'ity raharaha ity ary mety hamoy mpampiasa an'arivony maro ny WhatsApp raha tapa-kevitra ny hizara, eny na eny, ireo angon-drakitra manokan'ny mpampiasa Facebook, nefa tsy manazava tsara izay alehany ihany koa. atao amin'izy ireo. Raha ny amiko dia tsy mikasa ny hanome alalana na iza na iza hizara ny mombamomba ahy manokana aho, nefa tsy fantatro izay hatao aminy na ny fomba hampiasana azy, ka efa nanapa-kevitra ny hampiasa rindranasan-kafatra fandefasana hafatra eo noho eo ianao. Raha toa ahy ianao dia nandray ity fanapahan-kevitra ity, ity misy fomba vitsivitsy hanovana ny WhatsApp.
8 Hevitra malalaka
Iray amin'ireo safidy vitsivitsy hafa amin'ny WhatsApp izay manana ny fanohanan'ny mpampiasa, izay mitohy mitombo rehefa mandeha ny fotoana, dia telegrama. Ary ity fampiharana fandefasan-kafatra mailaka ity dia afaka nanolotra ny mpampiasa izay tena nilainy, nefa tsy voafandrika amin'ny raharaha manjavozavo na hafahafa.
Raha tsy maintsy miavaka amin'ny Telegram isika dia tsy isalasalana fa fiarovana natolotra ny mpampiasa sy ny hafainganana. Ho fanampin'izany, ny fahafahan'ny fandefasana sary nefa tsy mampihena ny kalitaony, ny sticker na ny fanomezana ary ambonin'izany rehetra izany ny fahafaha-manao chat miafina amin'ireo mpampiasa hafa, izay voafafa avokoa ny fampahalalana rehetra ary koa manimba tena rehefa afaka fotoana voafehinay. ny tsirony.
Raha mbola tsy nanandrana Telegram ianao dia mandany ny fotoanao ary aorian'ny ataonao dia mety tsy tadidinao hoe inona ny WhatsApp na ireo tombony azo avy amin'izany.
Ara-dalàna satria misy ny WhatsApp eny an-tsena -dalana,. Ny fahombiazany any amin'ny firenena sasany dia azo ampitahaina amin'ny an'ny fandefasan-kafatra fandefasana hafatra eo no ho eo an'ny Facebook, na dia ny sasany aza tsy dia voamarika akory.
Azontsika lazaina izany Safidy mahaliana izy io, miaraka amina interface kely, fiasa ary safidy hafa, miaraka amina sentiana aziatika tokoa. Anisan'ireo tombony ananany ny fahafahana manao antso VoIP na mankafy ny serivisy amin'ny alàlan'ny solosaina noho ny kinova PC.
Mampalahelo fa na eo aza ny fanoloran'i Line antsika tombony sy fiasa mahaliana sasany, any Espana, ohatra, dia tena voafetra ny fampiasana azy, izay midika fa ho an'ny mpampiasa maro dia tsy tena safidy hafa amin'ny WhatsApp izany raha tsy mandresy lahatra ny namana sy ny fianakaviana hamela manomboka mampiasa azy io dieny izao izy ireo.
LINE: Miantso sy mandefa hafatra maimaim-poana
Ny iray amin'ireo lafiny izay tsy maharesy lahatra antsika momba ny WhatsApp dia ny tsiambaratelo atolony antsika, ary indrindra tato ho ato izay ataony amin'ny data manokana. Raha be ny ahiahinao, mety misy safidy hafa Signal, izay nankatoavin'i Edward Snowden.
Anisan'ireo tombony atolotry ity fampiharana fandefasan-kafatra mailaka azo antoka ity ny fanoratana ny hafatra rehetra, ny mety hisakanana ny hafatra sasany amin'ny alàlan'ny teny miafina na fanakanana pikantsary.
Ankoatr'izay Signal koa mamela anao hanao antso am-peo, toy ny mitranga amin'ny fampiharana hafa maro karazana amin'ity karazana ity, na dia manana ny mampiavaka azy manokana aza ny feon'izy ireo dia voahidy, satria mitranga amin'ny hafatra rehetra.
Signal - Hafatra manokana
Developer: Fisorohana famantarana
Na dia tato ho ato aza dia manandrana misongadina eo amin'ny tsenan'ny fifaninanana Google amin'ny alàlan'ny Google Allo i Google, dia efa manana fampiharana tsara an'io karazana io ankehitriny; Hangouts.
Angamba tsy afaka nankasitraka ny fomba mendrika an'ity serivisy ity tamin'ny mpikaroka fikarohana izahay, izay manome anay ny mety handefasana sy handefasana hafatra, fa koa hanaovana antso am-peo sy antso an-tsary, miaraka amina kalitao tsara amin'ny lafiny roa. Na izany aza, ny fahombiazany dia tsy araka ny nampoizina na dia eo aza ny zava-misy fa azo ampiasaina amin'ny saika sehatra finday rehetra ary koa ao amin'ny kinova birao.
Hanandrana indray i Google miaraka amin'i Google AlloNa dia mety tokony handinika ny fanamafisana ny Hangouts indray aza ianao, satria tsy isalasalana fa iray amin'ireo fampiharana fandefasan-kafatra mailaka tsara indrindra eny an-tsena sy tena mpanolo ny WhatsApp mahery vaika foana.
Iray amin'ireo fampiharana fandefasan-kafatra mailaka mahazatra sy malaza indrindra Skype, izay indrisy nandritra ny taona maro izay tsy nalaza intsony. Saingy, androany dia mbola mety ho safidy mahaliana an'ny WhatsApp izy io ary ampiasain'ny mpampiasa maro amin'ny andavanandron'izy ireo.
Ny hatsarany lehibe dia kalitao goavambe atolony rehefa manao antso an-tsary, izay apetraky ny maro amin'ny haavon'ny antso mahazatra rehetra, sy ny mety fandefasana sy fandraisana hafatra.
Androany dia manana mpampiasa be dia be izy, eo amin'ny sehatry ny fandraharahana sy avy amin'ny kinova solosaina, na dia ampiasaina be aza ny fampiasana azy amin'ny fitaovana finday.
Angamba tsy dia mahazatra anao loatra ilay fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo WeChat fa amin'izao dia manana mihoatra ny Mpampiasa mavitrika 600 tapitrisa manerantany. Marina fa any Espana sy firenena maro hafa dia mbola tsy nalaza be izy io, fa noho ny isan'ny mpampiasa an'io dia tsy afaka manadino izany izahay amin'ny fampidirana azy ao amin'ity lisitry ny WhatsApp hafa ity.
Raha jerena ny mampiavaka azy, ny fahombiazana dia mihoatra ny voamarina ary mitovy amin'ny hafa ihany mamela anao mandefa sy mandray hafatra, nefa koa miantso video miaraka amina kalitao somary avo lenta ary koa ampiasao ny fampiharana amin'ny alàlan'ny iray amin'ireo kinova maro misy. Ho famaranana farany, voamarin'ny Trust, zavatra ankafizin'ny mpampiasa maro.
Ny fotoana any amin'ny firenena maro dia tsy tonga ho an'ny WeChat, fa angamba ny lesoka amin'ny WhatsApp dia hahomby amin'ny ankapobeny ary hanomboka hampiasa azy amin'ny lafiny rehetra isika.
Talohan'ny fisian'ny WhatsApp dia efa maro ireo mpampiasa no efa nanana fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo amin'ny fitaovana BlackBerry. Fantatrao fa miresaka momba izany izahay BlackBerry Messenger izay vao tsy ela akory izay dia serivisy iray ampiasain'ny olona ana hetsiny maro manerantany. Androany, ny krizy iainan'ny BlackBerry sy ny fisiany voafetra eny an-tsena dia tsy very tamin'iza n'iza, fa tsy nahatonga ny BBM hanjavona tamin'ny fiainantsika.
Ny orinasa kanadiana dia nanandrana nampiroborobo ity serivisy ity, izay mihoatra ny fantatry ny ankamaroan'ny olona rehetra, natomboka ny kinova tsy ho an'ny fitaovana BlackBerry ihany fa ho an'ny iOS sy Android izay nahitany fahombiazana kely ihany.
BlackBerry Messenger dia fampiharana fandefasana hafatra eo noho eo fotsiny, izay, raha ny nanjo an'i BlackBerry, dia nino fa ho tafavoaka velona amin'ny zava-drehetra na saika ny zava-drehetra nefa tsy manavao velively. Ankehitriny dia manandrana mitady ny tenany indray izy ary toa mahomby izy, amin'izao fotoana izao dia efa nanao dingana tsara tamin'ny BBM izy ireo, izay safidy iray hafa ho an'ny mpampiasa WhatsApp.
BBM - Tsy misy intsony
ankehitriny Misy safidy maro hafa amin'ny WhatsApp eny an-tsena ary iray amin'ireo isan-karazany indrindra. Na izany aza, ny olana dia ny tsy fitadiavana fomba hafa mahomby sy manome antsika safidy sy fiasa mitovy amin'ny fampiharana an'ny Facebook, fa kosa mitady izay misy ny namantsika, olom-pantatra na mpianakavy rehetra.
Raha ny momba ahy dia andro vitsivitsy lasa izay, nanapa-kevitra ny hiala tao amin'ny WhatsApp aho, miaraka amin'ny alahelo sy ny tsy fahampiana, handeha hifindra any Telegram. Tsy manana fitarainana momba ny fiasan'ny WhatsApp aho, na dia tsy vonona ny hanao varotra ny angon-drakitra manokana sy manokana aza aho, satria tadiavin'ny fampiharana fandefasan-kafatra malaza eran-tany. Toa ahy, misy maro hafa, izay tsy hifandray amin'ny olona sasany, fa hanana ny data-piainany soa aman-tsara.
Ny fandraisana ny dingana avy any WhatsApp mankany amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra hafa eo no eo dia tsy mampivadi-po mihitsy araka ny inoan'ny maro Ary mihabetsaka ny safidy hafa misy kalitao avo kokoa ary tsara kokoa noho ny WhatsApp ary mihamaro ny mpampiasa mampiasa fampiharana fandefasan-kafatra maro miaraka, noho izany tsikelikely ireo olan'ny mahita olona sasany amin'ny serivisy an'ny Facebook ihany.
Inona no safidy tsara indrindra ho an'ny WhatsApp ho anao?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Solony 7 amin'ny WhatsApp no ​​tsara na tsara kokoa aza
Rodolfo Hernandez dia hoy izy:
Nisafidy viber aho satria eto Amerika Latina dia maro ny mpanaraka azy,
Valiny tamin'i Rodolfo Hernandez